(Fizarana faha 6)
18 – Amin’ny maha « Neuropsychiatre » anao, inona no torohevitra ho an’ny vehivavy voan’ny androbe nefa te hanan-jaza ?
Alohan’ny hanapahan-kevitra fa hanan-janaka dia tokony hanatona mpitsabo matihanina ny vehivavy manana io aretina io. Ny dokotera (neurologue) miara-miasa amin’ny mpitsabo mpampivelona (gynécologue-obstétricien) no mandanjalanja ny mahamety na tsia ny fitondrana vohoka na ho an’ny reny na ho an’ny zaza vao hiforona.Ankoatra ny fanadihadiana ara-medikaly, dia tontosaina koa ny fitsapana sy ny fizahàna manaraka programa maty paika.
Misy karazana krizy sasan-tsasany sy soritr’aretina mety ampihemotra ny fitondrana vohoka. Misy fanafody sasany fitsaboana ny androbe tsy azo omena ny vehivavy mitondra vohoka. Ankoatra izany, ny fitondrana vohoka dia tranga manokana hafa mihitsy ka tokony harahi-maso mitokana. Ny tanjona ho an’ny mpitsabo (Neurologue) dia ny fampiasana fanafodin’ny aretina androbe mandaitra nefa amin’ny daozy faran’izay ambany sady tsy misy fiantraikany rahateo amin’ny fahasalaman’ny reny sy ny fitomboan’ny zaza. Eo no anisany tena ilàna fatra manara-penitra eo amin’ny fanafody fitsaboana ny Androbe ka amin’ny ra no refesina izy io (dosage sanguin). Ny fanomezana fanafody dia miankina ihany koa amin’ny fahafaha-manao sy ny enti-manana eo amin’ny marary. Io dia hialana amin’ny tsy fihinanan’ny marary ny fanafody izay omen’ny dokotera azy. Misy fanaraha-maso samihafa arakaraka ny fitomboan’ny vohoka hisorohana izay mety ho aretina na koa mety hampisy fahasamponana eo amin’ny zaza vokatry ny fampiasana fanafody fitsaboana ny androbe. Tsy hadino koa ny mety fiantraikan’ny fanafody sasany eo amin’ny zaza minono ka tokony hotandremana fatratra.
Tena zava-dehibe tsy azo hodian-tsy hita ihany koa ny fanaovana fizahàna amin’ny alalan’ny ekografia, mandritra ny dingana rehetra eo amin’ny fitomboan’ny zaza am-bohoka mba hisorohana ny tsy fahalavorariana.
19 – Tokony hanaraka fombam-piainana ara-pahasalamana manokana ve ny olona voan’ny androbe ?
Araka ny efa voalaza, ny androbe dia vokatry ny karazana fihetsehan’ny herin’aratra tsy manaraka ny tokony ho izy ao anatin’ny ati-doha. Izany dia avy amin’izay rehetra mety manakorontana ny fiasan’ny sela ao amin’ny atidoha ao. Anisan’ny antony manamora ny fitrangan’ny krizy, dia ny tsy fihinanana fanafodin’androbe eo amin’ireo marary, eny na dia indray mandeha fotsiny aza. Ny fihinanana fanafody izany dia tokony ho lasa fomba aman-panao mahazatra andavanandro. Ny tsy fahampian’ny tori-maso, indrindra fa raha miverimberina dia vao mainka mety manakorontana ny fomba fiasan’ny selan’ny atidoha. Ny zavatra rehetra izay tafahoatra ka manelingelina ny fiasan’ny atidoha dia mety miteraka krizy eo amin’ny olona efa voan’ny androbe. Mety mifanampy koa ny korontana samihafa, toy izany ny adin-tsaina diso tafahoatra (alahelo, hafaliana, fahatezerana…) na koa ny fisotroan-toaka, ny fandraisana zavamahadomelina sy ny fihinanana fanafody sasan-tsasany. Ny marary koa dia samy manana ny mampiavaka azy ka mety misy toe-javatra manokana mora mampihetsika ny kriziny. Anjaran’ny manodidina azy no manampy sy manazava aminy fa tokony ho lanjalanjainy na foanany mihitsy izay rehetra antony mety hitarika any amin’ny krizy. Ny tenany rahateo koa dia tokony ho tonga saina amin’ny zavatra ataony. Indreto misy ohatra vitsivitsy amin’ireo antony marobe mety hitarika any amin’ny krizy : ny tsy fahampian’ny torimaso, ny fiainana tsy milamina, ny tabataba be, ny fahazavana sasan-tsasany maharitra na tsia, ny fijerena « écran » ny telefona, « tablette », ny fanaovana jeux amin’ny solosaina na koa ny fijerena fahitalavitra.
Fanontaniana, fanamarihana, sosokevitra, tsidiho ny pejy